Momba anay - SHIJIAZHUANG SHUMEI TEXILE CO., LTD
Ny matihanina amin'ny orinasanay dia namokatra karazana lambam-pandriana an-trano, lambam-pandriana trano fandraisam-bahiny ary lambam-pandriana zazakely.
Manondrana ny vokatray any Etazonia, Kanada, Afrika Atsimo, Eoropa, Amerika Atsimo, Oseania ary faritra hafa izahay.
Nandritra ny Taona
Nandritra ny taona maro, miaraka amin'ny tanjaka ara-teknika matanjaka, vokatra avo lenta sy matotra, ary rafitra serivisy tonga lafatra, dia nahavita fandrosoana haingana izahay, ary ny fanondroana ara-teknika sy ny vokatra azo avy amin'ny vokatra dia nohamafisina sy noderain'ny ankamaroan'ny mpampiasa, ary nahazo ny taratasy fanamarinana ny vokatra avo lenta, ary lasa orinasa malaza eo amin'ny indostria.
Amboary io loko tonga lafatra io ho an'ny fampiharana lamba rehetra, Ny lokon'ny lamba fanaonay dia hifanaraka tsara amin'ny aingam-panahinao, ahafahanao mahatsapa ny lokonao amin'ny alàlan'ny famokarana.
Tena takatry ny mpiasanay fa tsy maintsy mitazona ny toe-tsaina toy izao manaraka izao izahay:
1. "Ny kalitao no kolontsainay" 90% ny fitaovana famokarana dia nafarana avy any JAPAN sy ALEMAINA.
2. "Ny fotoana dia volamena" dia manana ekipa matihanina izay afaka manao kalitao tsara ao anatin'ny fotoana fohy.
3. “Fanompoana sariaka amin'ny orinasa iray” Izany no antsika mandrakizay.
Tongasoa eto amin'ny mpanjifa avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao mba hifandray aminay amin'ny fifandraisana ara-barotra amin'ny ho avy sy hahatratrarana fahombiazana!Ho hitanao fa tena mpamatsy tena tsara izahay.
Ny orinasanay dia hanohy hanome lalao feno ho an'ny tombontsoany manokana, mifikitra hatrany amin'ny foto-kevitry ny "mitarika amin'ny siansa sy ny teknolojia, manompo ny tsena, mitondra ny olona amin'ny fahamendrehana ary mikatsaka ny fahalavorariana" ary ny filozofian'ny orinasa "ny vokatra dia olona", tsy tapaka. manatanteraka fanavaozana ara-teknolojia, fanavaozana ny fitaovana, fanavaozana ny serivisy ary fanavaozana ny fomba fitantanana, ary tsy mitsahatra mamolavola vokatra lafo vidy kokoa mba hanomezana ny filan'ny fampandrosoana ho avy.Amin'ny alalan'ny zava-baovao mba hampivelatra tsy mitsaha-mitombo ny vidiny-mahomby vokatra mba hihaona amin'ny filan'ny fampandrosoana ho avy, ary haingana manome mpanjifa amin'ny avo-tsara, ambany vidiny vokatra no tsy mitsahatra mikatsaka ny tanjona.